Incwadi ekhaya ezintle kwiRuka Centre, free WiFi - I-Airbnb
Incwadi ekhaya ezintle kwiRuka Centre, free WiFi
Le ndlu ibekwe kwiziko Ruka. Indlu entle enegumbi elinye ilungele abantu abane. Xa ilifti ye-Talvijärvi ivuliwe ungafikelela kwi-ski slope ngqo ukusuka kwigumbi. Kungenjalo, ungafumana lula kwithambeka ukusuka kwiziko leRuka ngeGondoli-lift entsha. Umgama ukuya kwi-Ruka Centre kunye ne-slopes kunye neendlela zokunqumla ilizwe le-ski yi-100 m. Indlu ineembono ezintle. Indlu ixhotyiswe kakuhle kwaye kukho iWiFi yasimahla. Wamkelekile!
Kukho iibhedi ezimbini kwigumbi lokulala kunye nesofa (i-sofa yokulala) ezimbini kwigumbi lokuhlala. Indawo yokuhlala ibandakanya i-sauna, indawo yomlilo, indawo yokupaka, i-balcony, umatshini wokuhlamba kunye nekhabhathi yokomisa.
Le ndlu ifumaneka kufutshane neRuka Village (Iziko likaRuka) ngoko ilungile nakwabo beza ngenqwelomoya. Umgama oya kwilali yeRuka (iivenkile, iindawo zokutyela, ibhasi ukuya kwisikhululo seenqwelomoya njl.njl.) yi-100 m. Xa uhlala eRukahome awudingi moto!
Sine-WiFi yasimahla kwigumbi lokuhlala.
4.68 · Izimvo eziyi-57